माधव नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय, को को हुँदैछन् मन्त्री ? - Naya Aawaj
माधव नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय, को को हुँदैछन् मन्त्री ?
६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा जाने भएको छ । नेपाल समुहले ६ मन्त्रालयमा माग गरेको छ । तर धेरै दल सहभागी हुने सरकारमा मन्त्रालयको टुंगो भने लागेको छैन । एउटै पार्टीका फरक समुह भएका कारण देउवालाई मन्त्रालयको भाग लगाउन निकै समस्या परेको छ ।
नेपाल समुह पनि सरकारमा जाने भएपछि देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । माधव पक्षका नेता मेटमणी चौधरीले आफुहरु सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेको पुष्टि गरेका छन् । त्यसका बारेमा औपचारिक निर्णय लिन समुहको बैठक बस्दैछ । देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसद बैठक बसेर त्यसवारे टुंगो लगाउने भएका हुन् ।
चौधरीले आफुहरुले ६ मन्त्रालयमा दावी गरेको भएपनि मन्त्रालयको टुंगो भने नलागेको बताएका छन् । बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बस्ने नेपाल समुहको बैठकले त्यसवारे औपचारिक निर्णय गर्नेछ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपालको ठूलो भूमिका छ । उनले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संघर्ष गरेका थिए ।
मंगलवार बिहान मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले नेता नेपाललाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पछि यस वारेमा धारणा बनेको हो । उक्त विषयमा प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए।
माधव नेपाल पक्षलाई आममाफी दिने ओलीको घोषणा, माधव पक्षले पनि दियो यस्तो स्पष्टीकरण
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक ३ बजे बस्दै
राजेन्द्र महतो ठूलो मारमा
यसकारण जनादेश पनि थिएन ओलीको पक्षमा